Madheshvani : The voice of Madhesh - संशोधन मधेशको मात्र होइन, देशकै मुद्दा हो : महेन्द्र राय यादव
अध्यक्ष मण्डलका सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
० संविधान जारी भएको चार वर्ष भइसक्यो, तर तपाईहरूले संविधानप्रति अपनत्व महसुस नगरेर अहिलेसम्म विरोध गर्दै हुनुहुन्छ । अब पनि संविधानको विरोध गर्नु उचित हो ?
— संविधानसभाबाट संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनको माग हो । त्यसै आधारमा अन्तरिम संविधान एउटा सहमतिको दस्तावेज थियो । १६ बुँदे सहमतिको आधारमा ४ पक्ष मिलेर जसरी संविधानको घोषणा गरे, त्यतिबेला पनि हामीले विरोध गरेका थियौं । संविधान सहमतिको दस्तावेज बनोस् सबैको अपनत्व होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । तर तात्कालीन चार पक्षले हाम्रो मागलाई उपेक्षा गरे र २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरे । हामीले त्यो रात ब्याल्क आउट ग¥यौं । संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी जस्ता उपलब्धीहरू हामीले यो संविधानबाट पाएका छौं । यी विषयहरू सकारात्मक हुन्, जुन हाम्रो आन्दोलनको पनि माग थियो । यो संविधानमा हामीले संशोधनको विषय उठायौं । एक चरणमा संशोधन पनि भयो । अहिले पनि संविधान संशोधनको लागि संसदमा माग पेश भएको छ । त्यसमा बहस भएको छैन, विचाराधीन छ ।
संसदमा संविधान संशोधनको लागि दर्ता भएको अवस्था थियो । संविधान संशोधन होला भन्ने आशा र संविधानबाट प्राप्त उपलब्धी रक्षाका लागि हामीले निर्वाचनमा सहभागिता जनायौं । जनताले हामीलाई संविधान संशोधनको शर्तमा मत दिए र अहिले प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपाको संयुक्त सरकार संचालनमा रहेको छ । संविधानका केही दफा उपदफामा अहिले पनि हाम्रो असहमति छ । संविधानमा भएका उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै असहमतिहरूका विषयहरूलाई यही संविधानमा दुई तिहाईको सरकारले समेटोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो । यो मधेशको मात्र होइन देशको नै मुद्दा हो ।
० संविधानका जुन धाराले जनतालाई विभेद गरेको छ त्यस विषयमा जनता माझ नगएर किन संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउनुहुन्छ ?
– संविधान संशोधन हुन्छ भनेर हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका पनि थियौं । ज्ञापन पत्र बुझाउने, समय समयमा भेटेर के हुँदैछ भनेर जानकारी लिने काम पनि हामीले ग¥यौं । संसदमा पटक–पटक आवाज उठाएका पनि हौं । यी सबै हामीले जनतालाई जानकारी गराएका छौं । असोज ३ गते जारी भएको संविधान हाम्रो असहमतिमै जारी भएको हो भनेर जनतालाई हामीले पटक–पटक भनेका छौं । यस पटक सरकारले उर्दी जारी गरेर संविधान दिवस मनाउन आग्रह गर्दा पनि जनताले स्वस्फूर्त रूपमा दिवस मनाएन । संविधान भनेको अपनत्वको विषय पनि हो, उर्दी जारी गरेर मनाउनुको कुनै अर्थ छैन । यो दुई तिहाईको सरकार हो । यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्छ । देशमा शान्ति र स्थिरताका लागि यो सरकार बढी जिम्मेवार भएर अगाडि आउनुपर्छ । अहिले त संविधानमा लेखिएका विषयहरू पनि उल्लघंन भइरहेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएर संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ तर स्थानीय तहमा लोकसेवाले कर्मचारी माग गर्दा संविधान विपरित विज्ञापन गरियो । देशमा उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायले संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्नेर उठाएको मागलाई १ बुँदै सम्झौता गरेर जसरी संविधान जारी गरियो । यसले लामो आयु पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । फेरि त्यसमा कारक हामी होइनौं यही दुई तिहाईको सरकार नै हो ।
० विगतमा तपाईहरूको सहयात्री पार्टी तत्कालीन फोरम नेपाल र राजपा नेपालले मधेशभरी नै विरोध दिवस मनाएका थिए तर अहिले समाजवादी पार्टी सरकारमा छ र मौन छ । तपार्ईहरूको विरोध पनि खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ? सरकारले पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्दै आएको छ ?
— संविधान संशोधन आश्यकता त हुँदै हो औचित्य पनि पुष्टि भइसकेको । विगतमा कांग्रेस र माओवादीले संविधान संशोधनका लागि मतदान गरेको हो । मधेशवादी दलको अझ बढी जिम्मेवारी रहेको छ । हाम्रो ठूलो त्याग र बलिदानबाट यो संविधान बनेको हो । गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान संविधानसभाबाट जारी हुनु नेपालको लागि गर्व गर्न विषय पनि हो । निर्वाचन प्रक्रिया र जनमतद्वारा वैधानिकता मार्फत नै संविधान संशोधन गर्ने हो यो भन्दा अर्को विकल्प नै छैन । संविधान संशोधनकै मुद्दा लिएर हाम्रो सहयात्री पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो । उनीहरूको बढी दायित्व छ । उनीहरू काम गर्न सक्ने ठाउँमा छन् ।
० केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बाहिर ल्याउने र यो संविधानलाइ सबैको साझा बनाउने र पूर्णता दिने सरकारका लागि अवसर पनि हो र जिम्मेवारी पनि छ । यो जिम्मेवारीलाई नबुझेर आवश्यकता र औचित्यका आधार खोज्दै गयो भने देशमा पश्चिमी शक्तिको प्रभाव बढ्दै जान्छ । रेशम चौधरी अहिलेसम्म जेलमै छन् । हाम्रा सैयौं कार्यकर्तामाथि अहिले पनि झुटा मुद्दा लगाइएको छ, हजारौं मानिस आन्दोलनको समयमा अपांग भएका छन् । उपचार खर्च पाईरहेका छैनन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । यस्ता द्वन्द्व समस्याहरू कहिलेसम्म रहिरहन्छ । यस्ता मुद्दाहरू समयमा नै सम्बोधन नगर्ने हो भने संविधान माथि नै खतरा आइपर्न पनि सक्छ । हामीले पाएका उपलब्धीहरू पनि यत्तिकै गुम्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यसैले समयमै सचेत हुन जरूरी छ ।
० कार्तिक २८, २९ र ३० गते महाधिवेशनको मिति तोक्नुभएको छ तर त्यसको खासै तयारी त देखिदैन नि ? समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणको विषय पनि चलिरहेको छ पहिले पार्टी एकीकरण हो कि पहिले एकीकरण ?
— हाम्रो पार्टीले महाधिवेशन र पार्टी एकीकरण पनि गर्ने नीति लिएको छ । एकीकरणको विषयमा छलफल गर्न हामीले वार्ता टोली नै गठन गरेका छौं । वार्ता टोली अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेको छ । दुवैतर्फबाट वार्ता जारी छ र हामी एकीकरणका लागि सकारात्मक छौं । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलन बदलिसकेको छ । देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ । राजपा र समाजवादीको एकताले एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुन्छ । मधेशी, आदिवासी, जनजातिको चाहना पनि छ । पार्टी एकीकरण होस् भन्ने चाहना आम जनताको पनि छ । यो पार्टी एकीकरण भएको खण्डमा देशमा उत्पीडनमा परेका समुदायले माथि उठ्ने मौका पाउनेछन् । दुई पार्टी एकता होस् र एकताको महाधिवशेन होस् भन्ने सबैको चाहना हो । त्यसैले नै दुवै पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन ६ महिनााका लागि सारेका हुन् ।
० एकता पहिले कि महाधिवेशन पहिले ?
– एकता प्रमुख विषय हो । वार्ताको टेबुलमा हामी छौं । यहाँ रहुन्जेलसम्म महाधिवेशनको वातावरण त बन्दैन । एकता गर्ने र संयुक्त महाधिवेशन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । यसरी गर्दा वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनसक्छ । मधेशको मात्र होइन यो राष्ट्रकै माग हो ।
० राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरणको आवश्यकता किन ?
— हामीले ६ पार्टी मिलेर राजपा नेपाल निर्माण ग¥यौं । त्यो देश र जनताको चाहना थियो । हामी ६ पार्टी त एक भयौं हाम्रो एउटा पार्ट समाजवादी पार्टी बाँकी नै छ । उसलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर हामीले मलेठ घटना हुँदा संकल्प गरेका थियौं । यो देशमा कांग्रेस र कम्युनिष्टले मधेश र जनजातिको मुद्दामा एक ठाउँमा छन् हामी एक वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएर मधेशी जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।